+100 စိတ်ပျက်စရာနှင့်စိတ်ပျက်စရာ Phrases | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လူများမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသောစကားစုအမြောက်အမြားရှိပြီး၎င်းတို့ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိကြသည် စိတ်ပျက်စရာစာပိုဒ်တိုများ; အနုတ်လက္ခဏာဖြစ်နေပေမဲ့ငါတို့အားလုံးဟာခွဲခြားသတ်မှတ်ခံရဖို့တစ်ခုခုနဲ့အတူအလားတူအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမျိုးအစားတွင်အကောင်းဆုံးစကားစုများပါ ၀ င်ခြင်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး 115 စိတ်ပျက်စရာစာပိုဒ်တိုများ
သင်သည်သင်၏လူမှုရေးကွန်ယက်များပေါ်တွင်တင်ရန်စာပိုဒ်တိုများရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကရုပ်ပုံများဖန်တီးပါသို့မဟုတ် WhatsApp အဆင့်အတန်းတွင်ထည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စုဆောင်းမှုတွင်ဤစာပေပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ပါ ၀ င်သည်။ ထိုတွင်သင်သည်ချစ်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အလေးထားလိုသည်မှာဤအချက်သည်အဆင့်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း၊ မည်မျှပင်ဝမ်းနည်းဖွယ်၊ စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါစေ၎င်းကိုကျော်လွှား။ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။
စိတ်ပျက်စရာ တ ဦး တည်းပြaနာတစ်ခုပြောပြရန်တောငျ့သောအခါ, စကားများနောက်ဆုံးတော့ထွက်လာသည့်အခါ, သူ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌လူတစ် ဦး, စိတ်ရင်းမှန်ကိုလက်ခံရရှိသူမဟုတ်ပါ ... သူကမရ ... သူကနားမလည်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတခြားနေရာတခြားနေရာပဲ။ " ? Federico Moccia ။
"လူတွေကသူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ရောနှောနေရင်စစ်မှန်တဲ့လူ့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ " ? Eckhart
အဆိုးဆုံးကတော့အခန်းတခုပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်နှိပ်စက်ကမခုန်တော့ဘူး။ - Orson Welles ။
“ စကြာ ၀ universeာကိုထင်ယောင်ထင်မှားဆက်ဖြစ်နေခြင်းထက်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခြင်းသည်နားလည်ခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ သို့သော်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပြီးစိတ်ချစေနိုင်သည်။ ? Carl Sagan ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေပါ ၀ င်လာပြီးစိတ် ၀ င်စားလာပြန်ပါတယ်။ - Murray Gell-Mann ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အစီအစဉ်တစ်ခုတည်းသောစိတ်ပျက်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောချင်သောတစ်ခုတည်းသောကြိုတင်မြင်နိုင်သောကံမကောင်းမှုဖြစ်သည်။ ? Fréderic Beigbeder ။
"သံသယတွေကအမှားတွေအရင်ကထက်ပိုပြီးအိပ်မက်တွေကိုသတ်ပစ်တယ်။ " ? Suzy Kassem
"ဒီရူးသွပ်မှုကသင်ယုံကြည်တာတွေအားလုံးဟာလိမ်ညာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာမင်းဟာမပြိုကွဲသွားဘူးလို့လူတိုင်းမျှော်လင့်တယ်" ? Shannon အယ်လ် Alder ။
မျက်ရည်နှစ်မျိုးမှာအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏မျက်လုံးများရှိသည်။ ? Pythagoras ။
စာအုပ်တွေဟာဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်စရာမကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ? သောမတ်စ် Carlyle ။
"ဒီဒေသကိုလာပြီးလေးကိုမကန်နိုင်တာကမင်းအစ်မနဲ့အတူကခုန်တာနဲ့တူတယ်" ? Diego Armando Maradona
“ စွမ်းအား၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုသိရန်သူတို့လက်တွင်ရှိသူများကိုပြန်သွားကြစို့။ ကိုယ်တော်၏စိတ်တော်ကိုသိရန်သူ့နောက်လိုက်များဆီသွားကြစို့။ ပါဝါ၏ဒုက္ခအမှန်တကယ်ပါ၏ ၎င်း၏အပျော်အပါး, စိတ်ကူးယဉ်။ " ? ချားလ်စ်ကာလက် Colton ။
ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုစိတ်ပျက်မိကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တိုင်းပြည်ကိုစိတ်ပျက်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ? ရစ်ချတ်နစ်ဆင်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကိုစိတ်ပျက်ခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်း၊ သံသယဖြစ်ခြင်း၊ အိပ်မက်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာတိုင်းသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ငါတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်း။ ? Jim Rohn
မင်းအမှန်တရားကိုစပြောတာနဲ့ချက်ချင်းပဲပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ ? Emmanuel Carrere ။
"ကျနော်တို့စိတ်ပျက်စရာမလွတ်နိုင်; သူတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာမင်းရဲ့မျက်နှာကိုပျက်စီးစေတဲ့ဝက်ခြံလိုအမြဲတမ်းပေါ်လာတယ်။ " ? Jeffrank Valdez ။
"အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေအကြောင်းပြောကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေတဆင့်သေစေလောက်တဲ့အထိပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်စရာမှတဆင့် (... ) ။ သူတို့ကိုအရာများစွာအတွက်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနိုင်သော်လည်း၊ ? ဗစ်တိုးရီးယားအိုကာပို။
"အားလုံးထင်ယောင်ထင်မှားမျက်စိကွယ်သောအနာ။ " ? မာ့ခ်အန်တိုနီ။
ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကငါတို့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးဖို့၊ မုန်းဖို့၊ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလျော့ချဖို့မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ကိုရင့်ကျက်ဖို့နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်လာတယ်။ ? Hermann Hesse ။
“ ကျွန်မတို့ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တုန်းကငါတို့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကကျွန်မတို့ကိုလဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်သက်သာစေတယ်။ လူသည်ဤအရာအားအခြားမျက်နှာသာပေးသကဲ့သို့ကျေးဇူးတင်တတ်၏။ ? ရှင်ပေါလုချားလ်စ် Bourget ။
ဘဝသည်ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၊ အနက်ရောင်ရွှေရောင်နေဝင်ချိန်များနှင့်မုန်တိုင်းများဖြစ်သည်။ - Laurence Olivier ။
ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သောဆန္ဒများကိုစားသုံးသူသည်နောက်ဆုံး၌ပုပ်ပျက်လျက်ရှိ၏။ - ဝီလျံဘလိတ်။
ကျမတို့ချစ်ရမယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမကျဘူး ? တေလာဆွစ်
စိတ်ပျက်စရာကအရာဝတ္ထုတွေဟာသူတို့ထင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်သင့် ဦး နှောက်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ပဲ။ " ? Brad Warner ။
"ဒီနေ့ငါ့မျက်လုံးထဲပစ်ချလိုက်တဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကအရင်ကနဲ့စုံလင်တယ်။ - Ricardo Arjona ။
"ဒီကတိတော်တော်များများဟာယုံကြည်မှုကိုလျော့နည်းစေတယ်။ " ? မင်္ဂလာပါ။
ယောက်ျားများသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောကြောင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားကြသည်။ ? အော်စကာ Wild ။
"ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာ။ ကျွန်တော့်မှတ်ဉာဏ်အံဆွဲကအဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထိန်းသိမ်းထားခဲ့တယ်။ " ? Paulo Coelho
ဒီဟာကဘဝပဲ၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်လုပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ? Fabrizio Mejía Madrid
"စိတ်ပျက်စရာစိတ်အားထက်သန်မှုနောက်ကွယ်မှပြုံးသွားလမ်းလျှောက်။ " - Madame De Staël
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြရန်အဘယ်ကြောင့်ခက်ခဲရသော်လည်းစိတ်ပျက်စရာကိုဖော်ပြရန်အဘယ်ကြောင့်အလွန်လွယ်ကူသနည်း" ? Kaui Hart Hemmings ။
အကယ်၍ သင်သည်အချို့သောပြစ်ဒဏ်များကိုရှောင်ရှားလို။ ၀ မ်းနည်းခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှားလိုပါကမည်သူမဆိုနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများမဖြစ်ပါနှင့်။ သင်၌ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းမရှိ။ ? Martial ။
“ ကဲ့ရဲ့ခြင်းထက် သာ၍ ဆိုးသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ အမှန်တရား။ ” - မင်းသား Talleyrand ။
ကျနော်တို့ကငိုတယ်၊ ဝမ်းနည်းပူဆွေးတယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျတယ်။ ? သောမတ်စ်ဖူလာ။
"ဘယ်သူ့ကိုမှဘာမှမျှော်လင့်မထားခဲ့ရင်မင်းဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး" ? Sylvia Plath ။
"လူတိုင်းတစ်ယောက်တည်းရိုးသား; ဒုတိယလူတစ်ယောက်ပေါ်လာသည်နှင့်အရေခြုံမှုစတင်သည်။ ? Ralph Waldo Emerson ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောမှားယွင်းမှုများအနက်မှတစ်ခုမှာဤကမ္ဘာပေါ်ရှိဘေးဆိုးများကိုဥပဒေဖြင့်ကုသပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ? သောမတ်စ်ရိဒ်
သူတို့အားလုံးဟာရူးသွပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့စိတ်ပျက်စရာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သူကိုအတွေးအခေါ်ပညာရှင်လို့ခေါ်တယ်။ ? Ambrose Bierce ။
“ ငါတို့လူသားတွေဟာကြီးမားတဲ့ ၀ မ်းနည်းမှုတွေ၊ ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေအတွက်အရှုံးမပေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေဟာအဖြစ်အပျက်အသေးအမွှားတွေထဲမှာကြီးမားတဲ့မြူခိုးတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေလို့ပဲ။ နှင့်ဘဝကဒီမြူ။ ဘ ၀ သည်နဂါးဖြစ်သည်။ ? Miguel က de Unamuno
"စိတ်ကူးယဉ်သူရဲကောင်းအားလုံးလိုပဲငါစိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းကိုအမှန်တရားနှင့်ရောထွေးသည်"? Jean-Paul Sartre
"ဘ ၀ ဟာငါထင်ခဲ့တဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပုံပြင်မဟုတ်ပါဘူး။ ? Megan Maxwell ။
"ငါစခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ အထီးကျန်ခြင်း မှလွဲ၍ ဘာမှမရှိဘူး" ? အာသာရွှေ။
စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတယ် ကျောက်ကြား၊ ? ဂျိန်း Austen ။
"စစ်မှန်တဲ့ရူးသွပ်မှုကကမ္ဘာကြီးရဲ့အရှက်ကွဲခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ငြီးငွေ့သွားခြင်းကအသိဥာဏ်ရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရူးသွပ်သွားစေသည့်ဉာဏ်ပညာကိုယ်နှိုက်ထက်မကပါ။ " - Heinrich Heine ။
"ဘဝဟာဒီလိုမျိုးပဲလိုချင်တယ်။ ၀ မ်းနည်းပူဆွေးမှုစိုစွတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆပ်ပြာတစ်မျိုးရှိစေချင်တယ်။ " ? Santiago Rocagliolo
ကျွန်ေတာ်တို့ကျွန်ေတာ်တို့ဟာကျွန်ေတာ်တစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့ကျေနရန်ကျွန်ေတာ်တို့လွတ်မြောက်ခဲ့ကြပြီ။ ဒီလွတ်လပ်ခွင့်လား? ? Carson McCullers ။
“ ကျွန်တော်မကစားဘူးဆိုရင်စိတ်ပျက်စရာမကောင်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာရှင်ကိုရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်ခန့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ငါအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့လေ့ကျင့်နေတယ်၊ ​​အရာရာကိုဖြည်းဖြည်းလုပ်ပြီးဆက်လေ့လာဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ” Maximiliano GastónLópez။
"ဒါဟာသင့်ကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘဲရှုံးနိမ့်ခြင်းအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျစေတယ်" ? Imran Khan ။
“ ဘဝဟာမပြတ်တမ်းရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ ဒါပေမယ့်မှတ်ဥာဏ်ကောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ " ? နန်စီသင်တက်လိမ့်မယ်
"စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်ရှောင်တာဝန်များကိုထောက်ပြယူဆရ။ ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်ကျတာပေါ့။ ? Marcelo Bielsa ။
“ တချို့ရုပ်ရှင်တွေကဘဝကိုပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပုံဖော်တယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ပျက်စရာတွေနောက်ကျလာတယ်။ " ? Federico Moccia ။
“ တစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးတာထက်ပိုကောင်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိဘူး။ ပြီးစီးသွားသောအချစ်ဇာတ်လမ်းများသည်စိတ်ပျက်စရာ၊ အချစ်မပြည့်စုံတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာအစဉ်အမြဲရှိနေတယ်၊ ? Alejandro Dolina ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားနှင့်ကောင်းကျိုးကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သာပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ? Blaise Pascal ။
"သင်ကစောင့်ဆိုင်းမည့်အစားလက်ခံရန်သင်ယူသောအခါ၊ စိတ်ပျက်စရာနည်းလိမ့်မည်" ? Robert Fisher ။
"ဒီဆန္ဒတွေကအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့စိတ်ပျက်စရာဆီကို ဦး တည်နေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာကနေလိုချင်တာအားလုံးဟာစိတ်ဆင်းရဲစရာ၊ ? Marco Aurelio ။
"သစ်ပင်ကသင့်ကိုပေးတဲ့အသီးနှစ်မျိုးကတော့အဆိုးမြင်ခြင်းနှင့်ခါးသီးခြင်းတို့ပါ။ " ? ရာဖေးလ် Chirbes ။
“ လူတွေကမင်းသူတို့ကိုလိုချင်တာအမြဲမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံမှာသူတို့ကမင်းကိုစိတ်ပျက်စေတယ်၊ ​​စိတ်ပျက်အောင်လုပ်ပေမဲ့အရင်ဆုံးသူတို့ကိုအခွင့်အရေးပေးဖို့လိုတယ်။ ? Chloe Rattray ။
"မင်းကအခြားလူလိုပဲစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ " ? Lea Seydoux
"လေတပ်ရေဒီယိုစာတိုက်နှင့်ရေဒီယိုကော်ပိုရေးရှင်း၏မျှော်စင်ဗုံးကြဲလေသည်။ ငါ့စကားသည်ခါးသော်လည်းစိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကျိန်ဆိုတာကိုသစ္စာဖောက်သူတွေအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်ဖြစ်မလား။ ဆာဗေးဒေါအယ်လန်
"ငါဟာ ၀ မ်းနည်းရတာဝမ်းနည်းပေမယ့်ငါဝမ်းသာမိတယ်" ? ဟိုဆေး Narosky ။
“ ကဗျာကောင်းတချို့ရေးဖို့စိတ်ပျက်ဖို့၊ မကျေနပ်မှုတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေအများကြီးလိုတယ်။ လူတိုင်းရေးသည်ဖြစ်စေ၊ ဖတ်သည်ဖြစ်စေဖြစ်စေ” မဟုတ်ပါလော။ ချားလ်စ် Bukowski ။
ပါတီ၏အဆုပ်အလတ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါလူထု၏မျှော်လင့်ချက်များသည်စိတ်ပျက်စရာကိုဖြစ်စေသည်။ ရန်သူသည်သူ၏ထိတ်လန့်မှုမှပြန်လည်သက်သာလာပြီး၎င်းမှရရှိသောစိတ်ပျက်စရာများမှသူသည်ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ? Leon Trotsky
"သံသယရှိသူကသူ့ကိုသစ္စာဖောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ " ? ဗော်တဲ
"စည်းကမ်းမရှိဘဲအတည်ပြုချက်ကိုစိတ်ပျက်စရာရဲ့အစဖြစ်ပါတယ်။ " ? Jim Rohn
သူကငါ့ကိုရှုပ်ထွေးစေတယ်၊ ​​သူ့အသံကကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားတယ်။ ငါ့မျက်စိကိုပိတ်လိုက်မှသာငါထိုက်တန်ထိုက်တဲ့ဒီပလ္လင်ကိုမြင်ရရင် ။ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုဘယ်တော့မှရောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး၊ ဒဏ္legာရီပုံပြင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ရင်ဘယ်သူမှပျော်ရွှင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ? Nach ။
ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုမှာအစိုးရသည်အမြဲတမ်းတတ်နိုင်သမျှ၊ အတိုင်းအဆမဲ့တန်ခိုးရှင်ကြီးကြီးဖြစ်သည့်သင်၏လမ်းစဉ်ပေါ်ပေါက်လာသည့်မည်သည့်ပြsolveနာကိုမဆိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟူသောအတွေးအပေါ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်တိုးများလာနေသည်။ ? မီလ်တန် Friedman ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနောက်မှစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတို့မှပါ ၀ င်ပြီးနောက်စိတ်အားထက်သန်မှုအသစ်များထပ်မံပေါ်ပေါက်လာသည်။ ? Murray Gell-Mann ။
"မျှော်လင့်ချက်အစောပိုင်းစိတ်ပျက်မိကြောင်းဟာမျှော်လင့်ချက်ပြည့်စုံလာတဲ့အခါအမာရွတ်တစ်ခုထွက်လာတယ်။ " ? သောမတ်စ် Hardy
"လိုအပ်သောမုသာစကားများ၊ ? Juan Villoro
“ ယခုနှစ်ပေါင်း (၂၀) ​​တိုင်တိုင်သင်လုပ်ခဲ့သည့်အရာများထက်သင်မလုပ်ခဲ့သောအရာများကြောင့်သင်ပိုမိုစိတ်ပျက်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ရုန်းကိုလွှင့်ပစ်ပါ။ လုံခြုံသောဆိပ်ကမ်းမှဝေးကွာပျံသန်းပါ။ သင့်ရဲ့ရွက်ထဲမှာကုန်သွယ်ရေးလေတိုက်ဖမ်း။ Explore ။ ကြားရတယ် ရှာဖွေပါ။ " ? အိပ်ချ်ဂျက်ဆင်ဘရောင်းဂျူနီယာ
ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာထက်ပိုပြီးဆိုးတဲ့အရာတွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ငါတော်တော်များများကြုံခဲ့ရပြီးပြီ။ -RJ Anderson တို့။
"သင်ခွဲနေသည့်အချိန်အထိနက်ရှိုင်းသောနက်ရှိုင်းမှုကိုမသိသောချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုသင်၌ရှိဖူးသလား" ? Kahlil Gibran ။
လူသည်လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝ၏။ သူကိုးစားသောလှည့်စားခြင်းကိုခံသောသူတသောင်းလဲသော်လည်း၊ သူအိမ်သူအိမ်သားတစ်ယောက်ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်သောသော့ခလောက်နှင့်သူခိုးသည်ရွေးတတ်၏။ ? အန်တိုနီယို Machado ။
"သူတို့ကကျွန်တော်သူတို့ကိုစိတ်ပျက်စေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါအဆိုးဆုံးပါပဲ၊ ခဏလေးအကြိမ်ကြိမ်တက်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိဘူးလို့ထင်တယ်" ? အဲလစ်ဇဘက် Eulberg ။
“ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးစိတ်ပျက်စရာများစွာကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးဟာယာယီသာဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းအမှတ်အသားမရှိပါဘူး။ တစ်နေ့ကျတော့ငါတို့သွားခဲ့တဲ့ခရီးကိုဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်။ " ? Paulo Coelho
“ ကျွန်တော့်ဘဝကိုဆက်တိုက်သေဆုံးမှုတစ်ခုထက်ပိုလို့မယူမှတ်ပါဘူး။ ငါပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုငါ့နောက်ကနေဆွဲလိုက်တယ်။ " ? Julio Ramón Ribeyro
ထို့အပြင်ဤထောင်ချောက်များ၌အမြဲတမ်းတွယ်ကပ်နေပြီးပြန်လည်ရှင်သန်မှုမရှိသည့်အတိတ်ကာလနှင့်အတူသူတို့၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော၊ ပျောက်ဆုံးသွားသောပရဒိသု၏အိပ်မက်၊ အဆိုးဆုံးနှင့်အဆိုးရွားဆုံးသောအိပ်မက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသူများစွာလည်းရှိသည်။ ? Hermann Hesse ။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောဆိုသူများမှသူတို့တစ်ခါမျှမပေးခဲ့ဖူးသူများ၏အဆိုးမြင်ဝါဒသည် ပို၍ ကြီးမားသောအဆိုးမြင်မှုမရှိပါ။ ? Jorge González Moore က
"စိတ်ပျက်စရာတွေ၊ အရင်ကလေ့လာခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီနေ့သင်ယူဖို့အချိန်အမြဲတမ်းရှိတယ်။ " ? Mario Benedetti
“ ငါပြန်ချင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ငါဘယ်သွားပြီလဲ အဘယ်ကျွန်း၌ငါပျက်စီးရာဖြစ်သနည်းဟုမေးသော်၊ ? Ismael Serrano ။
ငါဆိုလိုတာကငါသိနေသလိုမျိုးငါတစ်နေရာရာကိုရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတိုးတက်လေလေ၊ ငါ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာပိုနားလည်လာလေလေပဲ။ ကန္တာရတွင်လှည့်လည်သွားလာခြင်းသည်ကတိထားရာပြည်တော်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ " ? Paul Auster
"အခွင့်အလမ်း: စိတ်ပျက်စရာကြံစည်ရန်အဆင်သင့်အခါသမယ။ " ? Ambrose Bierce ။
သူတို့ကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေသောသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုသည့်စိတ်ပျက်စရာများရှိသည်။ ? ကားလို့စ် Ruiz Zafon ။
“ မင်းကိုပြန်လို့မရဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘ ၀ ကမင်းကိုအဆုံးမဲ့၊ အဆုံးမဲ့ညည်းတွားမြည်တမ်းနေသလိုပဲ…” ဟိုဆေးAgustín Goytisolo ။
“ ငါတို့ခေတ်၏ကံကြမ္မာကိုဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်၊ မက်စ်ဝက်ဘာ
အဆိုးရွားဆုံးသောသင်္ချိုင်းများသည်လူသေတို့၏သင်္ချိုင်းများမဟုတ်ပါ၊ အဆိုးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ရှိသောအိပ်မက်များဖြစ်သည်။ ” ? Jorge အိန်ဂျယ် Livraga Rizzi
သေဖို့ပျက်ကွက်ခြင်းသည်မျှော်လင့်မထားသောစိတ်ပျက်စရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ? Trinidad Giachino ။
“ ရုတ်တရက်လက်ချည်းသောလက်ဖြင့်၊ ဗလာကျင်းသောစိတ်နှလုံးဖြင့်၊ မှောင်မိုက်ထဲသို့ပြတင်းပေါက်ကဲ့သို့မှတ်ဉာဏ်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုရှာရန်နှင့်ငါတွေးမိသည်မှာငါဘာလုပ်ခဲ့သနည်း။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုပြန်လည်တည်ဆောက်မလဲ၊ ? Jaime Sabines ။
"နင့်ကိုချစ်တယ်နင့်နင့်ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ မင်းကိုငါအရမ်းချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သေခြင်းတောင်ငါ့အထီးကျန်ခြင်းရဲ့ငိုကြွေးမြည်တမ်းမှုကိုမခံနိုင်ဘူး။ " ? Eladia Blazquez ။
လူသည်မိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားရန်လျှို့ဝှက်မှုကိုအသုံးပြုသည်။ အခြားသူများကိုလှည့်စားရန်ထက် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ? Jaime Balmes ။
“ မင်းသူငယ်ချင်းတွေကိုယုံလို့မရဘူး။ သူတို့သည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေနိုင်သည်။ ? Rick Riordan ။
"အရာအားလုံးဟာအကောင်းဆုံးကိုဟန်ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းတို့သာပါဝင်သည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပြဇာတ်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ " ? Janne Teller ။
မိမိကိုယ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်၊ ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျသော်လည်းဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ? Murasaki Shikibu ။
"အတွေးအခေါ်များသည်မလွဲtoကန်စိတ်ပျက်စရာဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။ ? Enrique Tierno Galván။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏စိတ်ကူးနှင့်အတူသူ့ကိုအခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှအပ၏အယူအဆထုတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုအတွေးအခေါ်နှစ်ခုစလုံးသည်လူ့အတွေး၏သမိုင်းတွင်အဖျက်ဆုံးဖြစ်သည်။ နှစ် ဦး စလုံးသည်မနာလိုမှုဖြင့်မွေးဖွားခဲ့ပြီးလုံခြုံမှုကင်းမဲ့။ စိတ်ဓာတ်ကျမှုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ? Toni Morrison ။
"ကြီးမားတယ်လို့ထင်သူတိုင်းအမှားကြီးလုပ်မိရမယ်" ? Martin Heidegger
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌စိတ်ပျက်စရာများ၊ သစ္စာဖောက်မှုနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများပင်လျှင်၊ သူတို့သည်ဘ ၀ အဖြစ်ဆိုးများဖြစ်သည့်အချိန်၌ပင် ၀ ိညာဉ်ကိုအစေခံကြသည်။ " ? သောမတ်စ် Moore
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်မပြည့်စုံသောဆန္ဒများ၊ အမာရွတ်များကိုသတိရခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုအတုနှင့်မှားယွင်းစွာတည်ဆောက်ခြင်းတို့ဖြင့်အိပ်မက်ခဲ့ရသည်။ ငါတို့ကိုအစဉ်မပြတ်တွန်းလှန်။ ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပို၍ စစ်မှန်သော၊ ဟန်ဆောင်မှုကင်းသောအချိန်တိုင်း၊ ငါတို့ရဲ့အမှန်တရားကိုပိုရှက်လာတယ်။ " ? Mario Benedetti
"ငါ့ပရိယာယ်နားလည်မှုထက်သာလွန်။ သူကငါ့ကိုဗုဒ္ဓကိုနားလည်စေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သူလည်းငါ့နောက်ကိုမလိုက်ဖို့တားဆီးထားတယ်” ? Emil Cioran ။
“ ခင်ဗျားကိုစောင့်နေတာဟာဒီမိုးခေါင်တဲ့အချိန်မှာမိုးရွာတာကိုစောင့်နေသလိုပဲ။ ဒါဟာအသုံးမကျနှင့်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ " ? Hilary Duff
"ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ယောင်ထင်မှားမှုတွေဒါမှမဟုတ်လှည့်စားမှုကိုငြင်းပယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒီအချက်ကတခြားသူတွေကိုထပ်တူထပ်မျှငြင်းပယ်ဖို့ကြိုးစားတာကိုခွင့်ပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ? ခရစ္စတိုဖာဟစ်တလာ။
“ ဘဝမှာမင်းလိုချင်တာကိုရအောင်လုပ်နိုင်သလောက်စိတ်ပျက်စေတဲ့အရာတစ်ခုရှိလား။ ” - ရောဘတ်လူးဝစ်စတီဗင်ဆန်။
စိတ်ပျက်စရာများသည်ဘဝ၏အမွှေးအကြိုင်များဖြစ်သည်။ ? Theodore က Parker ။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကရရှိခဲ့တဲ့ဉာဏ်ပညာထက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားတာပါ။ " ? ဂျိုးဇက် Roux
“ မင်းအတွက်ငိုနေတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းကအဲဒါနဲ့မထိုက်တန်ဘူး မင်းဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အမှန်တရားကမင်းဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ငါ့ရဲ့ထင်ယောင်ထင်မှားမှုကြောင့်ဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါငိုတယ်။ " ? Steve Maraboli
"အားလုံးဝင်ပြီးအလိုဆန္ဒအဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ " ? André Maurois
“ မင်းကိုပြောပါရစေ။ မင်းဟာအထီးကျန်သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်သူဘာပဲပြောပြောသူဟာအထီးကျန်မှုကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအရင်ကကမ္ဘာနဲ့ရောနှောပေါင်းသင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်လူတွေကသူ့ကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ? ဂျိုဒီကိုကိုကို
သင်၏မျက်စိကိုဖွင့ ်၍ သင်၏နှလုံးကိုပိတ်စေသည့်စိတ်ပျက်စရာများရှိပါသလား။ အမည်မသိ။
ငါတို့ကိုတစ်ချိန်ကလှည့်ဖြားခဲ့သူတွေအားလုံးကိုမယုံတာကပညာရှိရာရောက်တယ်။ ? Rene ဒေးကား
"မုသာ၏သံချပ်အင်္ကျီသည်မှောင်မိုက်၌သိမ်မွေ့စွာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်လူကိုအခြားလူများထံမှသာမကမိမိစိတ်ဝိညာဉ်မှဖုံးကွယ်ထားသည်။ " ? အက်ဒွပ် Morgan Forster ။
“ ဒီနေ့ငါအသက် ၂၀ ရှိတုန်းကယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုယုံကြည်တယ်၊ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့အနှစ်သာရမှာလည်းအဲဒီအတွေးအခေါ်တွေအတူတူပဲ။ ငါကပိုပြီးကြီးမားတဲ့အုတ်မြစ်နဲ့အတူတူပဲ။ သူတို့ကိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူတွေကကျွန်တော့်ကိုနာကျင်စေပြီးစိတ်ပျက်စေတယ်။ ? စန်တီယာဂို Carrillo ။
"စိတ်ပျက်စရာသည်ပညာ၏သူနာပြုဖြစ်သည်။ " ? Bayle Roche ။
မင်းတို့မျှော်လင့်ပါတယ် စိတ်ပျက်စရာစာပိုဒ်တိုများ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေပေးဖို့ငါတို့အားလုံးကိုစုစည်းခဲ့တယ်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်၏လူမှုကွန်ယက်များပေါ်ရှိဆောင်းပါးကိုမျှဝေနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်သင်၏ထင်မြင်ယူဆချက်သို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးစကားစုဖြင့်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုလည်းသင်ထားနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » +100 စိတ်ပျက်စရာနှင့်စိတ်ပျက်စရာ Phrases